Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka wuxuu ku dhawaaqayaa shabakadaha internetka ee kaabayaasha dhaqaalaha ee bisha Juun - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka wuxuu ku dhawaaqayaa shabakadaha shabakadaha kaabayaasha dhaqaalaha ee bisha Juun
Aqoon isweydaarsi ku saabsan saamileyda daneeyayaasha iyo ballaadhinta arjiga dhismaha ayaa loo qorsheeyay
OLYMPIA, Wash - Guddiga Hawlaha Dadweynaha wuxuu martigelinayaa laba shabakad internet oo kaabayaasha dhaqaalaha ah bisha Juun:
Wareegtada Daneeyayaasha, Juun 17, 1:30 ilaa 3:00 pm.
Kulankan khadka tooska ah wuxuu bixiyaa cusbooneysiin ku saabsan horumarinta barnaamijka ballaarinta Guddiga Hawlaha Guud. The Zoom webinar waxay kaqeyb qaadan doonaan daneeyayaasha iyo wada-hawlgalayaasha wadahadal furan oo kusaabsan shaqada laqabtay, halka barnaamijku usocdo, iyo dadaallada daneeyayaasha hadda iyo mashaariicda.
Helitaanka taleefanka ayaa la heli karaa kuwa aan awoodin inay kumbuyuutarka ku galaan internetka. Lambarka wicitaanka: 253-215-8782, nambarka kulanka: 91167768265, nambarka sirta ah: 776314. Diirada-saarista wareegtadan daneeyayaashu waxay ku saabsan tahay horumarinta iyo hirgelinta siyaasadda.
Aqoon isweydaarsiga dalabka maalgelinta dhismaha Broadband, Juun 18, 1:30 ilaa 3:00 pm
Tani Zoom webinar waa aqoon isweydaarsi loogu talagalay kuwa xiiseynaya inay codsadaan deeqaha dhismaha ee ballaadhinta Guddiga Hawlaha Guud iyo amaahda. Guddidu waxay rajeyneysaa furitaanka wareegan maalgalinta bisha Luulyo 13, 2020. Kaqeybgaleyaasha aqoon isweydaarsiga oo leh hagitaan cad oo ku saabsan dhameystirka arjiga guuleysta, oo ay kujiraan howlaha horudhaca ah ee sharciga looga baahan yahay oo ay tahay in la dhameystiro ka hor codsashada Inta xaadiritaanka webinarkan yahay ma loo baahan yahay dalabka, waa fursad weyn in la helo hanuunin iyo in la caddeeyo wixii su'aalo ah.
Helitaanka taleefanka ayaa la heli karaa kuwa aan awoodin inay kumbuyuutarka ku galaan internetka. Lambarka wicitaanka: 253-215-8782, lambarka kulanka: 97889980730, lambarka sirta: 549340.
"Aqoon isweydaarsiyadan waxay matalayaan heerarka ugu dambeeya ee horumarinta barnaamijka ee barnaamijka ballaadhinta PWB," ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Scott Hutsell. “Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu muujiyey kala qaybsanaanta dhijitaalka ee gobolkaan, iyo haddii aan ka hadlayno telemedicine, barashada masaafada, ama ganacsiga elektarooniga ah, baahida loo qabo xalka khadka tooska ah ee adduunka ayaa cad. PWB waxay ku faaneysaa inay qeyb ka tahay xalkaas iyada oo leh barnaamij balaaran oo loogu talagalay in lagu hubiyo in bulshooyinka ay wax ka qaban karaan baahidooda iyadoo la raacayo xalka muddada dheer ee ku habboon xaaladdooda gaarka ah. ”
Kuwa aan awoodin inay si shakhsi ah uga soo qayb galaan, labadan websaydhba waa la duubayaa oo lagu dhejinayaa Guddiga Howlaha Guud website.
Shelley Westall, Maareeyaha Barnaamijka Howlaha Dadweynaha ee Broadband, 360-725-3162
Penny Thomas, Isgaarsiinta Ganacsiga, 206-256-6106
broadbandDeeqaha bulshada iyo amaahdaWar-saxaafadeedGuddiga Howlaha Guud
← Ganacsigu wuxuu $ 970,000 ku abaalmariyaa mashaariicda tamarta nadiifinta ee caano shiid Ganacsi siinta maalgelin loogu talagalay mashaariicda daryeelka carruurta ee bulshada →